को औंलाहरु को लम्बाइ: मनोविज्ञान को मूल्य
एक व्यक्ति जीवनको वर्ष मा मान्छे को बहुमत आफ्नो कमीकमजोरी र अरूको भरिएको लुकाउन प्रयोग रही हुनुहुन्छ किनभने, तपाईं अगाडि छ जो बुझ्न गाह्रो संग पहिलो बैठक मा। नकारात्मक गुण foul-गन्ध को एक शक्तिशाली स्ट्रिम बाहिर तोड हुनेछ अघि तर, सम्भावित psychopath वा अन्य अप्रिय व्यक्तित्व पहिचान त कसरी? latent मानव गुणहरू तपाईं लम्बाइ मदत गर्नेछ चिनन मा मदत को औंलाहरु को। यो मापदण्ड को मूल्य अक्सर बेवास्ता गरिन्छ, या बस बेवास्ता गरे। आफ्नो शंकास्पद सिद्धान्त प्रचार कि असंख्य chiromantists र अन्य unscientific तथ्याङ्कले - कि कारण।
तर हात मानिसको भित्री संसार बारे केहि बताउन सक्दैन राय - एक ठूलो गल्ती। मनोवैज्ञानिक हातमा राम्रो चिनारी सक्छ भनेर भन्न भित्री संसार बस के खोज्न जान्नु आवश्यक यसको मालिक को।
हात को व्यवहार
तपाईं ध्यान गर्नुपर्छ पहिलो कुरा - यो तपाईंको साथी हातमा को आन्दोलन हो। उहाँले यो व्यक्तिले आफ्नो gnawing शङ्का वा आफूलाई को स्पष्ट अनिश्चित केही अन्य तरिकामा तिनीहरूलाई लुकाउन प्रयास, आफ्नो फिर्ता पछि आफ्नो हात लुकाउँछ भने।
कस clasped हात कुराकानीमा अप्रिय साथी छ भन्दै, वा त्यो आफूलाई बारे केही बताउन, तपाईं व्यक्तिगत inferences साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ छैन।
एक व्यक्ति आफ्नो हातमा के थाहा छैन भने, निरन्तर तिनीहरूलाई कुनै पनि वस्तुहरु, जोडहरुको या बस एक स्नायु तिनीहरूलाई फरफर flexing छुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ स्नायु प्रणाली वा अन्य व्यक्ति केही बलियो भावना लुकाउन प्रयास गरिएको छ एउटा समस्या छ। एक व्यक्ति सक्रिय कुराकानीमा gesticulating छ भने, यो चर्चा अन्तर्गत विषयमा एक जीवंत चासो यसको स्थान को एक निश्चित साइन छ।
को interlocutor बारेमा जानकारी छैन मात्र औंलाहरु को लम्बाइ दिन सक्छ लागि, हातमिलाउबाट मूल्य पनि धेरै उच्च छ। उदाहरणका लागि, यदि एक हातमिलाउबाट सुस्त र कमजोर, त्यसपछि तपाईं को सामने, सम्भवत, कमजोर-इरादों, मान्छे SPOILED। अचाक्ली बलियो हातमिलाउबाट - बलियो र विश्वस्त व्यक्तिगत को एक चिन्ह, बरु यसले डाटा गुणस्तर को एक अनुकरण गर्ने कमजोरी र अनिश्चितता लुकाउन क्रममा छ।
धेरै परिचित तेज, लापरवाहीसंग हातमिलाउबाट casually गरे। उहाँले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा मा हतारमा छ किनभने यो एक हातमिलाउबाट कुरा छैन, जसको लागि सबै व्यापार व्यक्ति भावशून्यता सामान्य साइन छ।
फारम पाम एक व्यक्तिको बारेमा धेरै बताउन सक्छ। को पाठ्यक्रम, मुख्य ध्यान औंलाहरु को लम्बाइ RIVETED, जो को मूल्य धेरै ठूलो छ। तर हामी औंलाहरु तरिका हातबाट बढ्न कि बिर्सनु हुँदैन।
पाम को सामान्य आकार सबैभन्दा हडताली गुण प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ।
व्यापक, अनियमित आकारको औंलाहरु संग देहाती हात अक्सर बुद्धि र सरल चासो कम स्तर संग एक व्यक्ति स्वामित्वमा छन्।
यस्तो मान्छे, निष्क्रिय braked छन् र रुचि ज्यादातर आदिम कक्षाहरू छन्। बरु, लम्बी, सुरुचिपूर्ण आकार लामो पाम र लामो औंलाहरु संग मा सूक्ष्म शारीरिक, कलात्मक प्रकृति उत्पादन गर्छ। सामान्यतया, यी हात को मालिक प्रतिभाशाली छन् वा कलात्मक गतिविधिको लागि एक penchant छ।
रूपमा कुल कोणीय र अनियमित आकार द्वारा निर्धारण गर्न सकिँदैन हात प्रकार, कहिलेकाहीं दार्शनिक भनिन्छ, लामो औंलाहरु, तर धेरै लामो छैन हात छ। एक हात जस्तै संग एक व्यक्ति गहिरो निष्कर्ष गर्न खतरा छ र मन र न्यायको समपार्श्व मार्फत संसारको मा देखिन्छ। यी हात अक्सर लेखकहरूले, संगीतकार, दार्शनिकहरू, thinkers हौं।
हात को वर्ग आकार अक्सर विश्वसनीय अर्थपूर्ण यथार्थवादी मा पाइन्छ। लगातार काम, assiduous र साहसी को पाम मा एक वर्ग आकार संग एक मानिस। कल्पना हुनत उहाँले कमजोर छ, तर त्यो एक विश्वसनीय र वफादार मित्र र सहयोगी छ। अर्को प्रकार, अघिल्लो एक समान - हात बेल्चा। व्यक्ति को प्रकार पनि ऊर्जावान र विश्वसनीय, उहाँले dared, सँगी kvadratnorukim गर्न धेरै हदसम्म यस्तै छ।
के औंलाहरु को लम्बाइ गर्छ
औंला लम्बाई - जब अप interlocutor हात को एक मनोवैज्ञानिक पोर्ट्रेट चित्रकला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड को एक। मनोविज्ञान लामो यो मुद्दा, यो विषय मा संकलित प्रयोगात्मक डाटा को धेरै संग फिक्री गरिएको छ। अध्ययन त्यहाँ लामो औंलाहरु र korotkopalymi नातेदारहरु संग मान्छे बीच महत्वपूर्ण मतभेद छन् कि देखाएका छन्। यी प्रकारका बीच मतभेद पनि विश्वास छैन भनेर महत्वपूर्ण छन्। तल औंलाहरु को लम्बाइ सम्बन्धित मुख्य गुण हो।
उहाँले मानिसको हात मा औंलाहरु को लम्बाइ कुरा छ के सोच, आफ्नै जीवन देखि उदाहरण सम्झन्छन्। ताकि सबैलाई आफ्नै अनुभव संग पारंपरिक मनोविज्ञान थियोसिस तुलना गर्न मौका छ। सामान्यतया, लामो-fingered मान्छे एक विश्लेषणात्मक मन जीवित संग endowed छन्, तर केही कमियां संग। तिनीहरूले प्रतिभाशाली र सूक्ष्म व्यक्तित्व हुन सक्छ, तर एक बरु बिरामी स्वभावका साथ। लामो औंलाहरु मानिस तिनीहरूले कुनै व्यावहारिक महत्त्व पनि भने, विस्तार गर्न पनि ध्यान हुन सक्छ।
साथै, यी मान्छे न्याय र जानकारी निर्णय फरक। भित्री impulses बोलिहाल्यौं भन्दा तिनीहरूले राम्रो फेरि लाग्छ। कहिलेकाहीं औंलाहरु को एक unnaturally ठूलो लम्बाइ छ। यो उल्लेखनीय विशेषता को मूल्य एकदम नकारात्मक हुन सक्छ - यस्तो हात अक्सर लाभ लागि जो कोहीले भन्दा चरण गर्ने तयार बेईमान व्यापारीहरु हौं।
छोटा र मोटा औंलाहरु
छोटो औंलाहरु को धारकों आवेगशील र ऊर्जावान। तिनीहरूलाई संचार सरल र राम्रो आयोजित छ। राम्रो र खुला मान्छे अक्सर औंलाहरु को एक सानो लम्बाइ छ। यस प्रकारको हात को मान पनि दाना एक मानव झुकाव र आवेगशील कार्यहरू रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ। तथापि, निकै छोटो औंलाहरु अक्सर हातमा दिमाग, मुर्ख मान्छे फेला परेन छन्। तर जसको औंलाहरु तपाईं छोटो देखिन्थ्यो सबैसँग, को मूर्ख लेख्न हतार छैन, यो कहिले काँही diametrically उद्देश्य वास्तविकता गर्न विरोध गर्न सकिन्छ जो सिर्फ एक सामान्य अवलोकन, छ।
के मानिसहरूको हात मा औंलाहरु को लम्बाइ गर्छ
को औंलाहरु को लम्बाइ एक मानिस बताउन सक्नुहुन्छ कसरी कडा भ्रूण विकास समयमा उहाँलाई टेस्टोस्टेरोनको प्रभावित। व्यवहार को केही सुविधाहरू सँगै औंलाहरु केही लम्बाइ तुलना गरेर पहिचान गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, बीचमा र को लम्बाइ भिन्नता सानो सूचकांक औंला, को सजिलो मानिसको सम्बन्ध निर्माण गर्न छ। को औंलाहरु बीचमा ठूलो भिन्नता थप crudely र थप स्वतन्त्र विषय बनाउँछ जो बलियो टेस्टोस्टेरोनको, प्रभाव संकेत गर्छ। टेस्टोस्टेरोन गर्न जोखिम को नै रकम कम थियो भने, मानिस मायालु र संवेदनशील साझेदार हुनेछ। यो सजिलो छ किनभने त्यहाँ एक समझौता र कम आक्रामक छ श्रीमान्सँगै एक परिवार मा, अधिक अनुरूप र मन को शान्ति हुनेछ।
को घन्टी औंला र साना औंला बीच फरक निष्ठा बारेमा मानिसहरू बताउन सक्छ। यो फरक पनि टेस्टोस्टेरोनको को दोष हो जो विश्वासघात को likelihood, ठूलो, महान्। एक परिणाम रूपमा, झुकाव परिवर्तन गर्न - उच्च मानिस मा टेस्टोस्टेरोनको मात्रा विकास अवधि, उच्च promiscuity प्रभावित। एक रोबोट, मायालु पति सजिलै धूर्त हर्मोन को शक्ति सामना गर्न सक्छन् - तर यो मानिस किनभने त्यस्ता पुरुष, दायाँ परिवर्तन र बायाँ गर्दै मतलब छैन।
के महिला मा औंलाहरु को लम्बाइ गर्छ
महिला औंलाहरु को अध्ययन लम्बाइ को परिणाम मानिसहरू ती बाट पनि फरक छैन। उदाहरणका लागि, एक महिला लामो घन्टी औंला छ भने, यो यौन साझेदार को एक ठूलो संख्या संकेत, तर सधैं।
साथै, शोधकर्ताओं हात मा औंलाहरु को एक वर्दी लम्बाइ संग महिलाहरु धेरै बच्चाहरु जन्म दिन, बलियो, स्थिर परिवार छ बढी सम्भावना छन् भन्ने फेला परेन। परिवर्तन गर्न झुकाव साथै एक लामो घन्टी औंला एक महिला, गैर-परम्परागत यौन सम्बन्ध प्रेम गर्न एक राम्रो मौका छ। र यहाँ, मानिसहरू जस्तै, टेस्टोस्टेरोनको, आफ्नो मन pernicious प्रभाव clouding दोष छ।
विभिन्न उमेर मा औंलाहरु को लम्बाइ
धेरै आमाबाबुले बच्चाको हातमा मा औंलाहरु को लम्बाइ के भन्छ छ रुचि हो। त्यसैले तिनीहरू विकास लागि उहाँलाई सबै भन्दा राम्रो अवस्था दिन आदेश आफ्नो बच्चा को प्रारम्भिक झुकाव जान्न चाहन्छु। क्षण मा, वैज्ञानिकहरु लम्बाइ र औंलाहरु को अनुपात हामीलाई मात्र गर्भावस्था को समयमा भ्रूण मा टेस्टोस्टेरोन को प्रभाव बारे बताउन सक्नुहुन्छ कि फेला परेन। यो, पाठ्यक्रम, उपयुक्त चिन्ह जवान व्यक्तिको चरित्र मा, बिना लिङ्ग को आयातित।
निस्सन्देह, हामी बस किनभने आफ्नो औंलाहरु को लम्बाइ हर्मोन वर्ण को गठन बाहेक छ यस्तो शिक्षा, पहिलो यौन अनुभव, र यति मा धेरै अन्य कारक, प्रभावित किनभने, तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो बच्चाहरु मा दिन हुँदैन। त्यसैले एक बच्चा को औंलाहरु को लम्बाइ एक वयस्क को हात मा औंलाहरु को प्रमाणित लम्बाइ जस्तै संकेत गर्दछ।
हातमा मा सजावट
विषय भएको औंलाहरु छ कि आभूषण साफ सक्छ कि पाम, केही को शारीरिक विशेषताहरु बाहेक। प्रत्येक औंला विभिन्न गुण लागि जिम्मेवार छ, त्यसैले केही औंलाहरु को सजावट झुकाव भएको Supervisory व्यक्ति जानकारी को धेरै प्रदान गर्न सक्छन्। निस्सन्देह, यो जानकारी मात्र विचार को लागि खाना दिन्छ। यो को ध्यान, तर पूर्ण यस्तो जानकारी भरोसा छैन सम्भव छ। के महिला को हात मा औंलाहरु को लम्बाइ गर्छ, हामी पहिले नै सिकेका छन्। तर रूपमा सजावट द्वारा प्रमाणित?
उदाहरणका लागि, यो औंठी मा घन्टी आफ्नो "म" को महत्त्व वृद्धि गर्न मानव इच्छा भन्छन्। को औंठी चयन सजिलो छैन, त्यसैले इच्छा धेरै बलियो हुन। झन्झन् सजाया औंठी म आफ्नो व्यक्ति प्रेम र थप ध्यान र अरूको पहिचान प्राप्त गर्न चाहन्छ, एक egoist जारी हुन सक्छ।
अत्यधिक आभूषण सूचकांक औंला एक domineering कठोर व्यक्तिको रूपमा यसको मालिक characterizes।
छैन केही लागि ठूलो शासकहरू सूचकांक औंला मा राम्रो विशाल छल्ले लगाउन मन पराएका, त्यसैले तिनीहरू आफ्नो शक्ति जोड आफ्नो व्यक्तित्व को प्रोफाइल जुटाउने प्रयास।
मध्य औंला - समाज मा स्थिति को एक सूचक। प्रेम गर्नेहरूलाई यसरी आफ्नो सामाजिक स्थिति वृद्धि समाजमा ठूलो प्रभाव बढाउनका प्रयास, यो सजाने। तसर्थ, त्यहाँ एक मानिस मध्य औंला देखाउँछ गर्दा अपमानजनक इसारा थियो। त्यसैले उहाँले आफ्नो स्थिति माथि भन्दै छ, र इशारा डिजाइन गर्ने एक सामाजिक सीढी मा धेरै कम छ। तनाव को बीचमा औंला मा विशाल उज्ज्वल घन्टी र यसको मालिक को सामाजिक स्थिति बढ्छ।
को घन्टी औंला विवाह छल्ले लगाउन प्रयोग एक ulterior मनसाय। यो मानव प्रकृति को संवेदी घटक प्रतिनिधित्व गर्छ। को घन्टी औंला मा सजावट मानिसको भित्री संसार कुरा, भावना र भावना झल्काउँछ।
साना औंला एक असामान्य व्यक्तित्व सजाने सामान्यतया पर्याप्त छ। यो विशिष्टताको, specialness जोड डिजाइन एक इशारा छ। धेरै सेलिब्रेटीहरू खरानी ठूलो देखि आफ्नो फरक देखाउन औंला शोभा बढाएका छन्। तर, घन्टी औंला को सजावट बरु वास्तविक अवस्था भन्दा बाहिर खडा गर्ने इच्छा संकेत हुन सक्छ।
को औंलाहरु को लम्बाइ, को मूल्य। मनोविज्ञान
निष्कर्ष मा, म हुनत मनोविज्ञान र मानव हात र प्रकृति को सम्बन्ध को मुद्दा सम्बोधन, यो क्षेत्र अझै पनि राम्रो तरिकाले बुझे छैन भनेर भन्न चाहन्छु। त्यहाँ बाहिर प्रयोग को विशाल संख्या बावजुद, कुनै सटीक, क्रमबद्घ विषयमा डाटा छ। त्यसैले चिन्ता छैन, यदि रिपोर्ट को पाम को आकार भनेर वा आफ्नो प्रियजनलाई बारे केही खराब। यो औंलाहरु को लम्बाइ यति महत्त्वपूर्ण छैन। महत्त्व यस सूचक chiromantists संलग्न र केही मनोवैज्ञानिक तपाईं भ्रममा हुँदैन। धेरै राम्रो यसको बारेमा एउटा धारणा गठन गर्ने, छैन आतंक यसलाई देखि भाग्नु बस किनभने तपाईं आफ्नो हात को unseemly गुण देखे एक व्यक्ति राम्रो थाहा।
रचनात्मक सोच लागि संगतले को बल
असंबादी सोचाइ के छ?
पेरिस सम्झौता: ग्रह तापमान2डिग्री माथि उठन हुँदैन
आफ्नै हातले सुक्खा कार सफाई भित्री: सुझावहरू
"बुद्ध-बार", मास्को: ठेगाना, मेनु, समीक्षा